Covid-19 Medical Consumable non-woven series series Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Covid-19 Medical Consumable non-woven series series Factory
izigqoko ezingezona ezilukiwe
Ama-caps alahlwayo we-LIFAN akhiqizwa endaweni yangasese ekamelweni elihlanzekile le-100,000, izinqubo ngezinto zokwenziwa kwe-premium. Ngaphambi kokulethwa kumakhasimende ethu, yonke imikhiqizo itholakala ngenqubo eqinile ye-QC eqinisekiswe yi-ISO 9001, uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO13485, ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu. I-LIFAN inikeza izixazululo eziphelele ze-OEM zamakepisi alahlwayo wohlelo lokusebenza oluhlukile. Ama-caps ethu akhiqizwa ukucaciswa okuqinile ngaphansi kokulawulwa okuqinile kwenqubo futhi ahlanganiswe nge-automation ukuqinisekisa ukusebenza okuhambisanayo nekhwalithi.
izembozo ezilahlwayo zezicathulo
I-LIFAN izembozo zezicathulo ezilahlwayo zenziwa endaweni yemvelo egumbini elihlanzekile le-100,000, izinqubo ngezinto zokwenziwa kwe-premium. Ngaphambi kokulethwa kumakhasimende ethu, yonke imikhiqizo itholakala ngenqubo eqinile ye-QC eqinisekiswe yi-ISO 9001, uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO13485, ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu. I-LIFAN inikeza izixazululo eziphelele ze-OEM zezembozo zezicathulo ezilahlwayo zohlelo lokusebenza oluhlukile. Isembozo sezicathulo zethu senzelwe ukucaciswa okuqinile ngaphansi kokulawulwa okuqinile kwenqubo futhi sihlanganiswe nge-automation ukuqinisekisa ukusebenza nekhwalithi engaguquguquki.
I-LIFAN imijiva elahlwayo yenziwa ngemvelo egumbini elihlanzekile le-100,000 ebangeni, izinqubo ngezinto zokwenziwa kwe-premium. Ngaphambi kokulethwa kumakhasimende ethu, yonke imikhiqizo itholakala ngenqubo eqinile ye-QC eqinisekiswe yi-ISO 9001, uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi le-ISO13485, ukuqinisekisa ikhwalithi ephezulu kakhulu. I-LIFAN inikeza izixazululo eziphelele ze-OEM zemibukiso elahlwayo yohlelo lokusebenza oluhlukile. Izingubo zethu zenzelwe ukucaciswa okuqinile ngaphansi kokulawulwa okuqinile kwenqubo futhi zihlanganiswe nge-automation ukuqinisekisa ukusebenza okuhambisanayo nekhwalithi.